बालिकाहरूमा १० वर्षमै महिनावारी !::Online News Portal from State No. 4
बालिकाहरूमा १० वर्षमै महिनावारी !
बागलुङ, २९ जेठ – नेपालमा बालिकाहरूमा १० वर्षको उमेरदेखि नै पहिलो महिनावारी सुुरु हुन थालेको पाइएको छ । यसले गर्दा स्वास्थ्यसम्बन्धी थप समस्यासमेत देखिन थालेका छन् । यसबारे बृहत् अनुसन्धान नभए पनि सामाजिक, आर्थिक स्थितिमा सुधार, पोषण वृद्धि, वातावरणीय र सञ्चारमाध्यम आदिको प्रभावले विगतको दाँजोमा कम उमेरमा महिनावारी हुन थालेको तर्क विशेषज्ञहरूको छ ।
वातावरणीय प्रभाव, पोषणको स्थिति आदिले गर्दा मोटोपन, छिट्टै मानसिक विकास आदिले पनि रजोदर्शनको उमेर कम हुँदै गएको आकलन उनको छ । ‘दुई दशकयता पहिलो महिनावारी हुने उमेर करिब ३ वर्ष अगाडि सरेको छ,’ परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालका निर्देशक एवं प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ प्रा.डा. जागेश्वर गौतम भन्छन्, ‘हाल महिनावारी हुने औसत उमेर १०–११ वर्ष भएको छ भने पहिले औसत उमेर १३–१४ वर्ष थियो ।’ महिलाको शरीरमा बोसोको एउटा खास मात्रा नपुगेसम्म महिनावारी सुरु हुँदैन । हाल पोषणको स्थिति राम्रो हुने भएकाले कम उमेरमै बोसोको मात्रा बढ्ने गरेको औंल्याउँदै डा. गौतम युवतीहरूको छिटो मानसिक विकास पनि महिनावारी छिटो हुने एउटा कारकका रूपमा रहेको औंल्याउँछन् ।
हाल फिल्म, टेलिभिजन, समाचार, सूचना आदिको सहज पहुँचले युवतीहरू कम उमेरमै यौन रूपले परिपक्व हुन्छन् । यसले गर्दा उनीहरूको शरीरमा हार्मोनसम्बन्धी विकास छिटो हुने भएकाले महिनावारी अगावै हुने गरेको डा.गौतम बताउँछन् । रजोदर्शनको उमेर स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया रहे पनि मुलुकमा यसको उमेरबारे कुनै खास विशेष अध्ययन भएको छैन । काठमाडौं मेडिकल कलेजकी प्रसूति तथा स्त्रीरोग विभाग प्रमुख प्रा.डा. चन्दा कार्की भन्छिन्, ‘मेरो अनुभवमा ग्रामीण क्षेत्रमा १३ देखि १५ वर्ष र सहरी क्षेत्रमा ११ वर्षमा औसत रूपमा रजोदर्शन हुने गरेको हो ।’
मधेसलगायत ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पोषणको स्थितिमा सुधार नआएकाले ती क्षेत्रमा रजोदर्शनको उमेर सहरी क्षेत्रको दाँजोमा बढी देखिएको छ । अन्य विभिन्न कारणसँगै मुलुकको सामाजिक, आर्थिक स्थितिमा सुधार भएर रजोदर्शनको उमेरमा कमी आएको प्रा.डा. कार्कीको ठम्याइ छ । मुलुकमा ९ वर्षको उमेरमा समेत रजोदर्शन देखिएको तथ्य औंल्याउँदै डा.कार्की १३ वर्षको उमेरमा रजोदर्शन हुनुलाई अत्यन्त उपयुक्त मान्छिन् । उनका अनुसार छिटो रजोदर्शन हुने महिलामा महिनावारीसम्बन्धी समस्यालगायत अन्य जटिलतासमेत देखिएका छन् ।
विशेषज्ञका अनुसार रजोदर्शनको उमेरमा कमी आउँदा यसले थप समस्या देखिन थालेको छ । पहिलेको दाँजोमा करिब ३ वर्षअघि नै यौन रूपले वयस्क हुँदा विभिन्न सामाजिक, शारीरिक र मानसिक समस्यासमेत देखिन थालेको हो । ‘मनुष्यलाई भोक लागेपछि खान्छ, रजोदर्शनको उमेरमा कमी आउँदा विवाहअगावै यौनसम्बन्ध राख्ने दरसमेत बढेको छ,’ डा.गौतम भन्छन् । कम उमेरका किशोरीलाई परिवार नियोजनका साधनलगायत बारेमा केही थाहा नहुनुका साथै यसबारे खासै मतलबसमेत नहुने भएकाले गर्दा किशोरीको गर्भधारण गर्ने दर पनि बढेको छ । करिब ४ वर्षअघि मुलुकमै गरिएको एउटा अध्ययनलाई औंल्याउँदै डा.गौतम भन्छन्, ‘अध्ययनले किशोरीको गर्भधारण गर्ने दर २५ प्रतिशत देखाएको थियो ।’